जसले धुर्मुसलाई धरधरी रुवाए : नेकपाका यी नेता, को हुन ? «
जसले धुर्मुसलाई धरधरी रुवाए : नेकपाका यी नेता, को हुन ?
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:२१
जेठ: धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण स्थालमा लगाइएको तारबारमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताको योजना र नेतृत्वमा भत्काइएको तथ्य खुलेको छ ।
नेकपाका नेता प्रकाश कँडेलकै योजना र नेतृत्वमा रंगशाला निर्माणस्थलमा डोजर चलाइएको हो । कँडेल आफूलाई गृहमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकट नेता भएको दाबी गर्छन् । उनै कँडेलको नेतृत्वमा बुधबार बिहान गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणस्थलको सुरक्षाको लागि लगाएको बार भत्काइएको हो ।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि कँडेल (सेतो टिसर्ट)
प्रहरीले बार भत्काउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनी सहित १६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको चितवनका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्ले बताए । मल्लका अनुसार बार भत्काउने कामका योजनाकार उनकै कडँल हुन् । मल्लले नयाँ पेजसँग भने,‘हाम्रो अनुसन्धान अनुसार कँडेलकै योजना र नेतृत्वमा भएको हो ।’
पश्चिम चितवनको मंगलपुरमा निर्माणाधीन रंगशालाको सामग्री सुरक्षाको लागि लगाइएको बार केही स्थानीयले डोजर चलाएर भत्काएका थिए ।
कँडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले बार भत्काएका थिए । बार भत्काएपछि प्रहरीले गरेको सर्च अभियानमा संकास्पद १६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइराखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्त दुर्गा रेग्मीले जानकारी दिए । बार भत्काउन प्रयोग भएको डोजरलाई नियन्त्रणमा राखेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अन्य व्यक्तिहरुको खोजी कार्य जारी उनले बताए । भने, ‘घर र आसपासमा खोजी कार्य जारी रहेको छ भेटिएको छैन ।’ राष्ट्रको गौरव संरचना निर्माणका क्रममा भएको अपराधिक क्रियाकलापको प्रशासनको टोलीले स्थलगत निरिक्षण गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, महानगरपालिकाको प्रमुख सहितको टोलीले निरिक्षण गरेको थियो ।
विहान डोजर चलाउने क्रममा धुर्मस–सुन्तली फाउण्डेशनका कर्मचारीहरुलाई धम्की दिएको थियो । कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले जनताले रगत–पसिना खर्चिएर बनाउन लागेको क्रिकेट रंगशालाको कम्पाउण्डमा डोजर चलाउदा ज्यादै दुःख लागेका बताए । राष्ट्रमा केही गरौ भनेर घरपरिवार छाडेर काममा लागेकालाई यस्ता कार्यले विचलित पार्न कोशिस भएको बताए ।
धुर्मुसका अनुसार आफ्नै आँगनअगाडि क्रिकेट रंगशाला बन्ने भएपछि स्थानीय खुसी भएका थिए । रंगशाला निर्माणको घोषणा गर्दा स्वागत गर्ने स्थानीयबाटै अहिले यस्तो घटना हुदा आफू मर्माहित भएको घुर्मुसको भनाई छ ।
धुर्मुसका अनुसार स्थानीय अगुवासँग यस विषयमा पटकपटक गरेका थिए । चारदिन अघिमात्रै पनि जग्गाकै विषयमा लामो कुराकानी भएको थियो । बाटो निर्माणको विषयमा कुरा टुंगो लागी सकेको थियो ।
धुर्मुसले उक्तबाटोमा मालवाहक गाडी पनि नगुड्ने र रामपुर जोड्ने बाटो भएकाले १० मिटर फराकिलो भए पुग्ने बताए । त्यसका लागि आवश्यक जग्गा छाड्न तयार भएका थिए । यसका लागि उनले चारदिनको समयसीमा दिएका थिए । तर, सहमति विपरित डोजर चलाइएको थियो ।
यसैबीच, धुर्मुस–सुन्तली फाण्डेशनले रंगशाला निर्माणको कार्य स्थगित गरेको छ । सुरक्षाको कारण देखाउँदै फाउन्डेसनले तत्कालका लागि निर्माण कार्य स्थगित गरेको त्यसका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले बताए ।
भरतपुर नगरपालिका–१५ रामपुरमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि हुदैछ । २० बिघा ६ कट्ठा जग्गामा बन्ने रंगशालाको अहिले डिजाइनको काम भइरहेको जारी छ ।
गत २०७५ माघ १६ गते फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच सो रंगशाला २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो रंगशाला निर्माणको लागि सरकारले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। रंगशाला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
घटनापछि धुमुर्सको प्रतिक्रिया
हामी सहनसिल छौं। हामी नकारात्मक कुरा बाहिर नजाओस भनेर पटकपटक उहाँहरुलाई सम्झाइरहेका हुन्थ्यौं। सम्झाउदा पनि जुन प्रहार भएको छ। अन्त्यतै दुखद् प्रहार भएको छ। न हामी हाम्रा लागि हिँडेका हौं। न हामी आफ्नो स्वार्थका लागि हिडेका हौं। आफ्नो पेशा घर परिवार सब चिज त्यागेर सिंगो देश र देशवासीको खुसीका लागि हिडिरहदा जुन प्रकारले प्रहार भएको छ। -नयाँ पेजबाट